समाचार Archives - जनसहयोग
जापानमा जनसहयोग जापानको पनि भिजिट नेपाल २०२०को तयारी गर्दै !
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को भव्य उद्घाटन
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को भव्य उद्घाटन गरिएको छ । त्रिपुरेस्वरस्थित दशरथ रंगशालामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन गरेकी हुन् । उनले एकताको प्रतिकको रुपमा रहेको दीप प्रज्जवलन गरेर भ्रमण […]
नागोया , जापान पछिल्लो समय जापानबासी नेपालीहरूको चर्चामा रहएको सामाजिक संजाल facebook ग्रूपले पनि आउदै गरेको भिजिट नेपाल २०२०को तयारी कार्यक्रम गर्ने भएको छ ! जापानबासीमा आफुले सकेको सहयोग जापानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले विगत २ […]
जापानमा नरुहितो बने राजा, ‘नयाँ युग’ सुरु भएको छ
Tokyo, Japan जापानमा नरुहितोले राजगद्दी सम्हालेका छन् । उनले गएराति औपचारिक रुपमा सिंहासन सम्हालेका हुन् । सन् १९८९ मा गद्दी आरोहण गरेका अकिहितोले ३० वर्षपछि मंगलबार पद त्यागेका थिए । आफू वृद्ध भएको र अस्वस्थ […]
काठमाण्डाै – राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइड बडी जहाजबाट ४५ हजार रुपैयाँमै जापानको यात्रा तय गर्न सकिने भएको छ । आउँदो असार १९ (४ जुलाई, २०१९) देखि जापानको ओसाका सिधा उडान […]
IPL मा सन्दीपको धमाकेदार बलिंग, जिते स्टाइलिस प्लेयर अफ द म्याच अवार्डसँगै भारु १ लाखको पुरस्कार
काठमाडौं । शनिबार दिल्लीको फिरोज शाह कोटाला मैदानमा आईपीएलको शनिबार दोस्रो खेल घरेलु टोली दिल्ली क्यापिटल्स जित्दा नेपाली स्पीनर सन्दीप लामिछानेले धमाकेदार प्रदर्शन गरे । ४ ओभरमा ४० रन दिएर ३ विकेट लिएका उनी सो […]